Ahoana ny fomba hanazavana izay tsapan'ny fahaketrahana amin'ny olona mbola tsy nahita izany - An-Tsaina
Ahoana no anazavanao ny fahatsapana ny fahaketrahana amin'ny olona mbola tsy nahita izany?
Atombohy amin'ny mazava ho azy.
Ilay anarana 'Famoizam-po' ara-bakiteny. Mampihena ny fahafahan'ny olona miasa sy mahatsapa ny ambaratongam-pihetseham-pony feno, manomboka amin'ny tsara sy miasa mankany amin'ny ratsy.
Ny olona tsy mbola niaina ny famoizam-po dia mazàna mandiso izany noho ny alahelo, saingy tsy izany.
Ny alahelo dia mety ho famantarana ny famoizam-po, fa toy izany koa ny fahalainana, ny tsy firaikana, ny fanirery, ny fiheveran-tena ho ambany, ny hatezerana, ny fanaintainana ara-batana, sy ny maro hafa.
Ny famoizam-po dia toa teny tsotra ety an-tany, saingy misy karazany sy toetran'ny fahaketrahana maro samihafa.
Ny olona salama raha tsy izany dia mety hiaina fahakiviana noho ny tontolo iainana na ara-piaraha-monina eo amin'ny fiainany.
Angamba izy ireo niaina ny fahafatesan'ny olon-tiana iray, manana asa haba manala azy ireo amin'ny heriny ara-tsaina sy ara-pihetseham-po , na tsy an'asa ary tapaka hatramin'ny ela.
Ireo zavatra ireo dia mety hiteraka fahakiviana ho an'ny olona salama, izay azo zohina amin'ny fiatrehana izany toe-javatra izany na amin'ny fanampiana amin'ny alàlan'ny fitsaboana na fanafody.
Ny olona iray dia mety hiaina fahakiviana ihany koa amin'ny aretina mitaiza, izay mety hahitana azy fa manana aretina miverimberina izay tsy maintsy tantaniny mandritra ny fotoana maharitra.
Indraindray dia vokatry ny simia ratsy ao amin'ny ati-doha, indraindray dia vokatry ny olana ara-pitsaboana hafa mety nananan'ny olona nanomboka tamin'ny aretina ara-batana ka hatramin'ny traikefa nahatsiravina tsy voatsabo.
Tsy mahazatra ny olona manana aretina mitaiza dia mamorona fahaketrahana ho voka-dratsy ateraky ny aretim-batany.
Saingy, izany rehetra izany dia mahatsapa ho toy ny fampahalalana ambonin'izay azonao nalaina avy amin'ny tranonkala fitsaboana mahazatra, sa tsy izany?
Tsy dia manazava ny atao hoe fahaketrahana mahatsapa toy ny
Te hamafiso fa ity famaritana manaraka ity dia fomba fijery iray fotsiny. Ny olona dia miaina aretin-tsaina mitovy amin'ny fomba maro samy hafa satria ny soritr'aretina dia afaka miseho sy tsy mitovy amin'ny olona tsirairay.
Mety hahatsapa ny olona sasany fa famaritana tsara izany raha ny hafa kosa mety tsy ho izy satria zavatra iray manokana izany.
Tsy misy fomba iray mazava hilazana azy fa ny olona ketraka rehetra dia hiteny hoe: 'Ie, izay e.'
Fa eto kosa…
Makà fotoana kely ary avereno jerena ny fotoana farany nahazoanao ny sery na gripa tena ratsy.
Ahoana no fahatsapanao ara-tsaina raha marary ianao? Ianao ve dia chipper sy upbeat? Nahafinaritra ve ianao? Mahery vaika ianao ary mazoto handeha?
Fantatro rehefa marary aho dia mahatsapa ho tsy miraharaha, tsy miraika, ary tena te hatory vetivety fotsiny sao dia afaka mahatsapa tena tsara kokoa rehefa mifoha indray.
Mazava ho azy, tsy afaka misoroka ny andraikitry ny fiainana fotsiny aho satria marary…
Misy fety fitsingerenan'ny andro nahaterahako mila mankany! Tsy maintsy mandeha miasa aho! Miantehitra amiko ny fianakaviako hanampy azy ireo hikarakara azy ireo! Ny olon-kafa dia miantehitra amiko fa ho eo ary afaka manatanteraka izay andraikitra raisiko amin'ny fiainana!
Ka mandeha any amin'io fankalazana fitsingerenan'ny andro nahaterahana io aho ary miezaka hihazona ny tenako mba tsy hisy olona marary.
Tsy faly aho na tsy salama, fa mitsikitsiky foana aho ary manandrana manao vazivazy amin'ny olona satria mifalifaly izy ireo ary tsy te hampidina olona aho satria tsy salama.
Miezaka ny tsy hisintona amin'ny zavatra be loatra aho, saingy mahatsiaro reraka be fotsiny noho ny aretina ka tena te hiverina hody any am-pandriana fotsiny aho, handry ary hatory an'io aretina io.
Fa tsy vitako izany.
Mila mitaingina ny asany ny ankizy ary mila omena sakafo ny ankohonana.
Ka mankany amin'ny fivarotana enta-mavesatra aho, manandrana misoroka ny olona ka tsy mila mody manao sosialy na marary hafa.
Tsy maintsy mahazo ireo entana enta-mavesatra ireo aho, mitondra azy mody, manangona ny ankizy ary mihidina ao anaty fiara mba hahafahako mitondra azy ireo amin'ny asany.
Nandehandeha namakivaky ilay magazay aho ary nandehandeha ny olona, ​​very tamin'ny ainy manokana ary tsy nahita ny aretiko.
Rehefa dinihina tokoa, tsy dia marary loatra aho. Reraka fotsiny aho ary mila manamboatra ireo zavatra ireo mba hahafahako mandeha eo am-pandriana ary antenaiko fa hatory ity.
Fa tsy afaka aho. Tsy maintsy mitondra ny ankizy amin'ny hetsika fanampiny izy.
Ataoko any izy ireo, fa reraka fotsiny aho.
Mipetraka irery eo ambonin'ireo mpandatsa-dra aho, indray, ka tsy mila hafaliana sandoka na mody manao fiaraha-monina satria marary.
Fa ny zanako tsy marary. Mitsiky izy ireo, faly ary mifaly.
Nikiakiaka sy nanofahofa tanana tamiko izy ireo, ka notereniko ny tsiky ary nihemotra aho mba hahatsapan'izy ireo fa nahazo fampaherezana aho ary afaka mifaly
inona no hatao rehefa malahelo be ny sipanao ianao dia maharary
Satria maninona aho no te ho enta-mavesatra ho an'ny olona tia ahy ny aretiko? Izay tiako?
Tsia, tsy hanao an'izany aho. Hitsiky tsiky aho ary hamakivaky an'ity. Avy eo afaka mody aho ary matory amin'ny farany.
Ary mitanjozotra mody any an-trano ihany izahay amin'ny farany, omeko sakafo sy karakaraina izy ireo, ary ankehitriny, afaka matory ihany aho alohan'ny hiasana rahampitso.
Angamba hahatsapa ho tsara kokoa aho rehefa mifoha.
Fa tsy izany aho.
Tsapako fa nitovy tanteraka tamin'ny zavatra tsapako omaly. Ary ny andro talohan'io. Ary ny andro talohan'io. Ary ny andro talohan'io. Ary ny herinandro talohan'io. Ary ny volana talohan'io. Ary ny taona talohan'io.
Loharano manampy hafa (mitohy etsy ambany ny lahatsoratra):
Fihetsika manimba tena: Ny antony, ny toetra ary ny karazany
Notaritaritiko hiala teo am-pandriana aho, notereniko hidina tao anaty fandroana, hikarakara ny ankizy ary handeha ho any am-pianarana, ary avy eo dia mila mandeha miasa aho.
Miezaka ny manao ny asako aho, saingy mahatsiaro ho manjavozavo fotsiny ny atidohako ary tsy handamina zavatra toa ny fantatro fa tokony hatao.
Ny fambara iray amin'ny fahaketrahana izay matetika tsy raharahiana amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny soritr'aretina dia ny fampihenan'ny fahaizanao misaina saina ny fahaizan'ny olona iray mamaha olana.
Mety ho vitako ny hanao azy rehefa afaka kelikely, fa ny atidohako tsy mampifandray ireo eritreritra ireo miaraka tsara satria mahatsiaro reraka be fotsiny aho ary very maina fotsiny ho an'ny angovo.
Fa ny lehibeko sy ny mpiara-miasa amiko tsy dia miraharaha izany. Tezitra sy sorena aho satria tsy afaka miasa amin'ny fahaiza-manao fantatro fa mahavita azy.
Mila mitsiky fotsiny aho ary mahazaka izany, mahavita an'io asa io, ary mamaky ny andro fiasako mba hanantenako mody, hatoritory bebe kokoa, ary hahitako raha azoko atao izao ny miala amin'ny aretina.
Avy any am-piasana aho, mandeha mody any an-trano hikarakara ny ankizy aorian'ny fianarany, ary mitarika azy ireo mankany amin'ny hetsika hafa fanampiny, izay hialako amin'ny olona indray, andramo ny hampifaly ny ankizy ary hamporisihako ny fifaliany sy ny fahasambarany.
Tsy afaka ny ho faly aho, fa farafaharatsiny azon'izy ireo atao mandra-pahatsapan'izy ireo ny fatiantoka ny fiainana. Manantena aho fa tsy ho ela izany.
Azo antoka fa tsy tiako ho marary toa ahy izy ireo, ka angamba raha fetrako ny fiparitahako amin'izy ireo dia tsy hisy fiantraikany be amin'izy ireo ny aretiko? Angamba.
Tena te hody fotsiny aho ary hatory mandritra ny fotoana fohy. Mahatsiaro reraka be aho. Izay rehetra tsapako dia moana sy kely noho izy tokony ho izy.
Ny olombelona dia zavaboary mampihetsi-po. Ny zavatra rehetra amin'ny fiainana ataontsika dia entin'ny fihetseham-pontsika amin'ny fomba sasany - fahatsapana adidy, fitiavana, filàna, fahasambarana, zava-bita, avonavona, fitiavan-tena, alahelo, fahamarinana, famirapiratana, hafanana.
Saingy ireo fahatsapana rehetra ireo dia singa iray fotsiny amin'ny tokony hahatongavan'izy ireo, nokapohina ary nokendaina noho ny havizanan'ny aretina.
Avelao irery aho dia afaka matory vetivety aho. Angamba hahatsapa ho tsara kokoa aho rehefa mifoha.
Ary noho izany dia mandeha matory indray aho izao hariva izao, mieritreritra fa mety ho andro tsara kokoa ny rahampitso ary tsy hahatsapa ho marary sy reraka intsony aho, fa izaho dia mandainga amin'ny tenako izao. Efa am-polony taona lasa izay.
Ary eo an-tampon'ny havizanana dia ny fanaintainana noho ny voina mahazo ny fiainana, famoizana olona tadiaviko rehefa mitombo amin'ny lalana samihafa na maty ny olona, ​​very asa, ary miatrika ho avy tsy azo antoka aho.
Nilaza ny dokotera fa hanampy amin'ny aretiko ity fanafody ity, hahatonga ahy tsy ho reraka, ary angamba hanasitrana ahy mihitsy aza!
Saingy, izany no nolazainy tamin'ireo fanafody fito farany izay tsy mandeha.
Fa ho raisiko ihany na izany aza, satria inona no mahasamihafa azy raha toa ka tsy mandeha izy na tsy mandeha amin'izao fotoana izao?
Na mandeha izany na lasa ilay fahatsapana harerahana sy fahabangana, na tsy mandeha ary mitohy ny fiainana toa izao.
Ary mandritra io fotoana io izay ahakendaina sy hikorontana ny fihetsem-ponao, ny aretina dia manamafy ny fihetsika sy eritreritra ratsy hafa.
Mandratra tena, mifoka izay, mitroka izay, mitifitra izay, misotroa izay, manao firaisana amin'izy ireo mba hahafahanao mahatsapa somary hafa kely, zavatra hafa hafa ankoatry ny tsy fahamaimaizana mandritra ny fotoana kelikely.
Fa na izany aza dia very ny famirapiratany satria lasa mankaleo sy tsy mitombina ireo zavatra ireo satria tsy manampy.
Ny fandosiran'izy ireo vetivety fotsiny ny akora simika mamirapiratra miaraka amin'ny voka-dratsy izay matetika miharatsy ny fahaketrahana, mandefa ahy mankany amin'ny fiharatsiana ratsy.
Tsy misy famirapiratana. Ary tsy te hiresaka amiko intsony ny olona satria manaparitaka azy ny aretina.
Mino izy ireo fa tsy tena misy ilay aretina, na hoe ao an-dohan'ilay olona fotsiny io. Mitsahatra tsy miraharaha sy manam-paharetana ny olona rehefa afaka kelikely.
Tsy manome tsiny azy ireo aho. Tsy nanam-paharetana intsony aho tamin'izay taona lasa izay.
Tsy safidy anefa ny famonoan-tena. Tsy rehefa hitanao hoe inona no ataony amin'ireo olona navela. Ary nahatsapa ny zavatra nataoko rehefa nisy olona tiako sy tiako ary nalain'ny aretiny, ny havizanan'izy ireo ary nisafidy ny hahafaty azy ireo.
Betsaka ny olona mamono tena tanteraka no tsy manao izany satria te ho faty izy ireo. Ny tadiavin'izy ireo dia ny fivoahana amin'ny aretina izay toa tsy ho afa-mandositra rehefa rendrika ao anatiny ianao.
Betsaka ny olona mitady ny teny hanazavana marina ny fahaketrahana, fa ahoana kosa no tena hanazavana ny tsy misy, fahabangana, fahabangana?
Ahoana no ampitanao ny hamafin'ny tsy misy dikany amin'ny olona mbola tsy nahita an'io tamin'ny fomba iray hahafahan'izy ireo mahatakatra ny sakany sy ny gravitr'ireo teny ireo?
Tsy haiko raha azo atao tanteraka izany.
Ny fantatro dia misy olona maro izay nivezivezy namaky ny havizanana sy ny tsy fitadiavana hahita fiadanam-po sy fahasambarana.
Ho an'ny olona sasany dia fitsaboana ara-tsaina ny hiatrehana ireo voina sy traumasy niainany, ho an'ny sasany dia fanafody hanitsiana ny tsy fifandanjan'ny simika, ary ho an'ny ankamaroan'ny olona dia fitambaran'ireo zavatra ireo.
Ny ampahany mahaliana amin'ny fahatsapana ny tena fihetseham-po farany taorian'ny fahaketrahana nandritra ny am-polony taona maro dia ny fianarana ny fomba fiasa eto amin'izao tontolo izao nefa manana fahatsapana zavatra. Fomba fihevitra vahiny somary somary ela tsy nahatsapanao na inona na inona hatry ny ela.
Ny famoizam-po dia sarotra, fa tsy ny farany.
Manana tanjaka sy hery bebe kokoa noho ny mety ho tsapanao ianao, indrindra raha toa ka efa ela ny fahaketrahana no nanimba io fahatsapana io.
Ary na dia mety ho sarotra aza ny mahita teny mety hilazana ny fahaketrahana amin'ny fomba manerantany izay azon'ny olona rehetra atao sy azony atao, ny fizarana an'ity lahatsoratra ity amin'ny olona iray no mety ho dingana voalohany hanampiana azy ireo hahatakatra bebe kokoa.
voampanga ho nisoloky rehefa tsy nanao
Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho ireto loharano ireto:
ny fomba fisarahana amin'ny olona miara-miasa aminao
fanekena olona iray amin'ny maha-olona azy